विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो ! राष्ट्रको ढुकुटीमा कति छ डलर ? – Online Kendra
३० पुष २०७८, शुक्रबार १२:१३ OnlineKendra
पुस ३०,काठमाडौँ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । देशभित्र रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाले करिब साढे सात महिनाको वस्तु आयात तथा छ महिना आठ दिनको वस्तु तथा सेवा आयात मात्रै धान्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा आएको शिथिलताले विप्रेषण आप्रवाहमा ६.८ प्रतिशतले कमी आएर तीन खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७।३ प्रतिशतले कमी आई तीन अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६।४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
अर्थ/सेयरविदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो आयात राष्ट्रको ढुकुटीमा कति छ डलर ?
प्रधानमन्त्री देउवा नियमित काममा फर्किए , आजै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने